Allgedo.com » Haddii Jidku kaa khaldamo!!! Qore: Dr. Cabduraxman Baadiyow
Kitaabka Qur’aanka waxaa Ilaahey usoo dejiyay in aadamiga aan jidka noloshu ka khaldamin, wuxuuna na siinayaa tilmaamo iyo tusaalooyin lagu hago nolosha. Waxaa intaas la jira, wuxuu Ilaahey noo soo diray rasuul bani-aadam ah, oo macalin noo noqda. Rasuulka ayaa noo cadeeyay waxyaabaha naga dahsoon, noona faahfaahiyay wixii si guud Qur’aanku noogu usheegay. Nabi Muxammad (nnk) noloshiisa, hadalkiisa, iyo ficilkiisa ayaa noo ah tusaale aan ka baran karno sida loo hirgelinayo tusaalooyinka Qur’aanka oo jidka toosanna loo qadi karo.